Factory-2 Factory - Mpanamboatra sy mpamatsy vokatra China
ultrasound viscous ceramic slurry fampifangaroana homogenizer
Ny fampiharana lehibe indrindra amin'ny fanaparitahana ultrasonic amin'ny indostrian'ny slurry dia ny manaparitaka sy manadio singa isan-karazany amin'ny slurry ceramika. Ny fihenan'ny habe dia mampitombo ny faritra ifandraisan'ny sombintsombiny ary ny fifandraisana akaiky kokoa, izay mety hampiakatra be ny hamafin'ny taratasy, azo inoana fa nohosorana loko ary hisorohana ny mari-drano sy ny fahatapahana. Ny ultrasonic dia ...
Homogenizer ny lokon'ny ultrasonia China
Ny tena fampiharana ny homogenizer ultrasonic amin'ny indostrian'ny lamba dia ny fanaparitahana ny lokon'ny lamba. Ny onja ultrasonika dia manaparitaka haingana ny ranoka, ny aglomerate ary ny fiangonany miaraka amina vovoka 20 000 isan-tsegondra, ka manaparitaka fanamiana mitovy amin'ny loko. Mandritra izany fotoana izany, ny sombin-javatra kely kokoa koa dia manampy ny loko hiditra ao amin'ireo mason-koditry ny lamba hahatratra ny loko haingana kokoa. Ny tanjaky ny loko sy ny haingam-pandoko dia mihatsara ihany koa. SPECIFICATIONS: MODEL JH1500W-20 ...
milina fanaparitahana pulp taratasy ultrasonic
Ny fampiharana lehibe indrindra amin'ny fanaparitahana ultrasonic amin'ny indostrian'ny taratasy dia ny manaparitaka sy manadio ireo singa samihafa amin'ny pulp taratasy. Ny fihenan'ny habe dia mampitombo ny faritra ifandraisan'ny sombintsombiny ary ny fifandraisana akaiky kokoa, izay mety hampiakatra be ny hamafin'ny taratasy, azo inoana fa nohosorana loko ary hisorohana ny mari-drano sy ny fahatapahana. SPECIFICATIONS: ADVANTA ...
Ny fitrandrahana ultrasonic dia ampiasaina amin'ny indostrian'ny ranom-boankazo sy zava-pisotro mba hitrandrahana akora mahomby toy ny pectin sy ny pigment an'ny zavamaniry. Ny fihoaram-pefy ultrasonic dia afaka mamakivaky ny rindrin'ny sela, mamela ny pectin, pigmenta zavamaniry ary singa hafa hikoriana ao anaty ranom-boankazo. Mandritra izany fotoana izany, ny ultrasound dia manohy miasa mba hanaparitahana ireo pectin sy hambolena pigment pigment ho kely kokoa. Ireo potika kely ireo dia azo zaraina milamina sy milamina kokoa ao anaty ranom-boankazo. Ny stabi ...
Masinina fanaparitahana karbonika nanotube 20Khz
Carbonnanotubes dia matanjaka sy malefaka nefa mirindra. Sarotra ny manaparitaka azy ireo any anaty rano, toy ny rano, étanol, solika, polymer na epoxy resin. Ny ultrasound dia fomba mandaitra ahazoana karneonaotubes mikorontana - tokana miparitaka. Carbonnanotubes (CNT) dia ampiasaina amin'ny adhesives, coatings ary polymers ary toy ny filler conductive elektrika amin'ny plastika hanaparitahana ny fiampangana static amin'ny fitaovana elektrika sy ny vatan'ny fiara misy ny elektrika. Amin'ny fampiasana nanotu ...
20Khz milina fanenon'ny loko ultrasonic pigment coating
Ny fanaparitahana ultrasonic dia fizotran'ny mekanika hampihenana ireo sombintsombiny kely ao anaty ranon-javatra ka manjary kely sy mitovy zarazaraina. Rehefa ampiasaina ho homogenizers ny masinera manaparitaka ultrasonic, ny tanjona dia ny hampihena ny sombintsombiny kely anaty rano hanatsarana ny fitoviana sy ny filaminana. Ireo sombintsombiny (manaparitaka dingana) dia mety ho soloina na ranoka. Ny fihenan'ny savaivony potika dia mampitombo ny isan'ny sombintsombin'ny tsirairay. Mahatonga ny fihenan'ny aver ...
milina fitrandrahana ultrasonic ho an'ny fitrandrahana solika tena ilaina
Ny fitrandrahana ultrasonika dia antsoina koa hoe emulsifiers ultrasonic, dia ampahany amin'ny onja vaovao amin'ny siansa fitrandrahana. Ity fomba fanavaozana ity dia kely vola lavitra noho ireo haitao mandroso hafa eny an-tsena. Io dia nanokatra ny kianja filalaovana asa kely na salantsalany hanatsarana ny fomba fitrandrahana azy ireo. Ny fitrandrahana ultrasonic dia miresaka ny zava-misy manahirana indrindra fa ny cannabinoids, toy ny THC sy CBD, dia hydrophobic voajanahary. Tsy misy solvent masiaka ...
Fitaovana fitrandrahana solika tena ilaina ultrasonic mahomby
Ny fitrandrahana rongony (CBD, THC) dia molekiola hydrophobic (fa tsy mety levona amin'ny rano). Raha tsy misy solvents manelingelina, matetika dia sarotra ny mamoaka cannabinoids sarobidy avy ao anaty sela. Ny teknolojia fitrandrahana ultrasonic dia mamaha ity olana ity amin'ny fomba mahomby. Ny fitrandrahana ultrasonic dia miankina amin'ny hovitrovitra ultrasonic. Ny fikarohana ultrasonic natsofoka tao anaty ranon-javatra dia miteraka gel kely an-tapitrisany amin'ny tahan'ny 20 000 isa-tsegondra. Mipoitra avy eo ireo poulety ireo, ka vaky tanteraka ny rindrin'ny sela mpiaro ...
fitaovana fampifangaroana emulsion savoka ultrasonic
Waul emulsion dia manana fampiasa betsaka, azo ampiarahina amin'ny fitaovana hafa hanatsarana ny fahombiazan'ny fitaovana. Toy ny: emulsion savoka ampiana amin'ny loko hanatsarana ny fametahana ny loko, ampiana emulsion savoka amin'ny kosmetika hanatsarana ny vokadran'ny kosmetika tsy tantera-drano. . Ny jet-micro mahery vaika nateraky ny fihoaram-pefy ultrasonic dia afaka miditra ao amin'ireo sombin-javatra hanatratra ny fanjakana nanometer, ...